सरकार कहाँ छ ? ‘मजदुरलाई सोध्नुस्’ – प्रधानमन्त्री ओली-Nznepal.com
सरकार कहाँ छ ? ‘मजदुरलाई सोध्नुस्’ – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार श्रमजिवी जनताको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नाम दिइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सिन्का भाँच्न नभई विकास गर्नका लागि आएको बताएका हुन् ।
“पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछ, ‘सरकार हरायो कहाँ छ ? के गर्दैछ ?’ कतिले सरकारले जुम्रा पनि मारेन भने । कसैले सरकारले सिन्को पनि भाँचेन भनेर लेख्न भ्याए ।” प्रधानमन्त्री ओलीलले भने, “यो सरकार जुम्रा मार्नका लागि पनि होइन, सिन्का भाँच्नका लागि पनि बनेको होइन । यो देश बनाउनका लागि, देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि बनेको हो । आज म भन्न चाहन्छु, सरकार खोज्नेहरुलाई अझै देख्नु भएन ?”
“मजदुरलाई सोध्नुस् सरकार कहाँ छ ? श्रमजीविलाई सोध्नुस् सरकार कहाँ छ ? दुःख पाएकार गरिब जनतालाई सोध्नुस् सरकार कहाँ छ ? त्यहाँ तपाईले जवाफ पाउनु हुनेछ” उनले भने । सरकार श्रमजीवि जनता भविष्य सुरक्षित गर्ने याजनामा सकरार तत्लीन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको लागि काम गर्न सरकार व्यस्त रहेको उल्लेख गरे ।
केही दिनमा मेलम्ची आउने र त्यसले सरकार कहाँ छ भन्ने जवाफ दिने उनले बताए । ‘काठमाडौंको सडक बढारिन्छ, धोइन्छ । अनि थाहा पाउनुहुन्छ सरकार कहाँ छ’ उनले भने, ‘कलंकी नागढुंगा सडक हेर्न जानुस्, त्यहाँ छ सरकार ।’
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा तामझाम बढी भएको भन्दै गरिएको आलोचना भइरहँदा देखिनँ, थाहा पाइनँ भन्नेलाई देखाउनका लागि पनि यो तामझाम गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीलले बताए । उनले भने, ‘आज हामीले यहाँ नौमती बाजा बजाएका छैनौँ । अरु काम नौमती बाजा बजाएर सुरु हुन्छन् ।’